Dagaal culus oo ka dhacay furimaha hore & Rasaas xoogan oo weli laga sii maqlayo jiida – Puntlandtimes
Dagaal culus oo ka dhacay furimaha hore & Rasaas xoogan oo weli laga sii maqlayo jiida
December 6, 2018 Abdurahmaan Yuusuf
GALKACYO(P-TIMES)- Wararka maanta naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa waxa ay ku waramayaan in deegaano ka tirsan gobolkaas uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland oo dhinac ah iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay saaka waaberigii hore ay weerar culus ku qaadeen fadhiisin ay ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland ka samaysteen deegaan lagu magacaabo Hareeri-Tuur.
Deegaanka Hareer-Tuur ayaa u dhaxeeya degmada Balad Xaawo iyo Tuulo Barwaaqo, waxaana shalay galinkii dambe fadhiisin cusub ka samaystay ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland oo ka baxay degmada Doolow.
Wararka aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal mudo saacado ah socday ay ku geeriyoodeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya isla markaasna weli rasaas goos goos ah laga maqlayo deegaanka Hareeri-Tuur.
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaliya ayaa gaadjay deegaanka Hareer-Tuur, kuwaas oo gurmad ahaan uga baxay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo.